လောကမှာ ဘယ်တော့မှ အကောင်းနဲ့မတန်တဲ့လူမျိုးတစ်စုသီးသန့်ကိုရှိပါတယ်။ စေတနာနဲ့ဘယ်လောက်ဆက်ဆံပါစေ၊ စေတနာကို ဝေဒနာထင်တဲ့လူမျိုးတွေ၊ အကောင်းဘက်က ဘယ်လောက်ဖြည့်တွေးပေးပါစေ၊ ကိုယ့်အတွက်ကျမှ အဆိုးချည်းမြင်ပြီး အပြစ်ပြောတတ်သူတွေ၊ ဘယ်လောက်အနစ်နာခံပါစေ၊ အသိအမှတ်မပြုဘဲ အနစ်နာမခံနိုင်တော့တဲ့အခါကျမှ တာဝန်မကျေသလို အသံကောင်းဟစ်တတ်သူတွေ၊ အများကြီးကြုံရမှာပါ။
တစ်နေ့တာအချိန်ကို သေချာခွဲတမ်းချပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းက သင့်ရဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်မှုအပေါ်် အကျိုးသက်‌ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အလုပ်ပြီးမြောက်လေ အချိန်ပိုထွက်လာလေလေ နဲ့ သင့်ကိုသင့် အခြားနေရာတစ်ခုခုလုပ်နိုင်ဖို့ရာ အချိန်ရလာစေပါတယ်။ အဲဒါအပြင် တစ်နေ့တာရဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိနဲ့စနစ်တကျအသုံးချနိုင်လာတဲ့အတွက် ရက်မှလ နှစ်ပြောင်းသောအခါ အကျင့်ကောင်းကြောင့် သင့်ဘဝက အခြားအချိန်ကိုအလကားဖြုန်းတီးနေသူတွေထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုသာနေပါလိ့မ်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာအချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ရာ နည်းလမ်းအချို့ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော််။
ကလေးကိုအချိန်ပေးခြင်းက ကလေးလိုချင်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးခြင်းထက်စာရင် အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးအတွက် ကလေးလိုချင်တာရော၊ မလိုချင်တာရော အရုပ်တွေ, မုန့်တွေ၊ ကစားစရာတွေ အားလုံးကိုဝယ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ကလေးကိုချစ်ခင်ပြခြင်းမပြီးပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။ ကလေးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ, ကလေးနဲ့အတူ ဆော့ကစားပါ၊ စာဖတ်ပြပါ၊ ကလေးကိုအချိန်ပေးခြင်းတွေကသာ ကလေးကို အမှန်တကယ်ချစ်ခင်ရာကျမှာပါ။
ကျန်းမာရေး ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း လူနေမှုဘဝ
ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားပြီး နာကျင်စရာကောင်းတဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကို အနိုင်ယူလိုက်ပါ။
ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားခြင်းက သင့်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကို ကုစားနိုင်တယ်ဆိုရင် ယုံမလား။ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာ သင့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကို နေပျော်လာနိုင်စေတာမို့ တကယ်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျိကျိတက်ချမ်းသာမှ၊ ငွေတွေသုံးမကုန်ဖြုန်းမကုန်အောင်ရှိမှ၊ ကားအကောင်းစားနဲ့ အိမ်တွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်မှဆိုတာမျိုးကဲ့သို့ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးကို ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုတိုးလာစေပြီး သင်ရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ ဖြစ်မြောက်အောင်၊ အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်လာတဲ့စိတ်ကို ပြောချင်တာပါ။
Covid ကာလအတွင်း ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့်အရာတစ်ခုခု ကြိုးစားသင်ယူဖြစ်ခဲ့လား ?
Covid ကာလအတွင်း ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့်အရာတစ်ခုခု ကြိုးစားသင်ယူဖြစ်ခဲ့လား ? ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ခဲ့လဲ မျှဝေကြရအောင်‌နော်❤
တကယ်တော့ ပေးဆပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ တချို့တွေက ဘာမှပြန်မလိုချင်ပါဘူးလို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အမှန်ပါပဲ.....ဘာကို ပြန်ရမလဲ...ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေးဆပ်ရတာက ပင်ပန်းပါတယ်။ ဘာကိုမှ ပြန်မလိုချင်ဘဲ ပေးဆပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင်ဘယ်လောက်ပေးဆပ်ပါစေ......မသိတတ်တဲ့၊ အသိအမှတ်မပြုတတ်တဲ့လူတန်းစားတစ်ရပ်လည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတာ မမေ့လိုက်ပါနဲ့အုံး။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကို သင်က ဘာမှမလိုချင်ပါဘူးဆိုပြီး ပေးဆပ်လိုက်ပေမယ့်လည်း သင့်ထံက ရသမျှသာ ယူသွားပြီး ရလေလိုလေ အိုတစ္ဆေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တောင် သင့်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ မဆို အစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ အခုလို လူတစ်ယောက်လုံးကို ပေးဆပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်း အလားတူပါပဲ။
သင်ခက်ခဲစွာ သင်ယူရမယ့် လူတွေအကြောင်း
ဘဝမှာ ရှင်သန်ရတဲ့အခါ လူတွေဆီကနေပဲ သင်ခန်းစာတွေအများကြီးပြန်သင်ယူရပါတယ်။ သင်ယူတတ်ရင်တတ်သလို သင်ခန်းစာများစွာကို ကိုယ်တိုင်သင်ယူလိုက်၊ အခြားသူတွေမှားခဲ့ဖူးတာတွေကိုသင်ယူလိုက်၊ ကိုယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၇တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို ကြည့်ပြီးသင်ယူရင်းနဲ့ပဲ ရင့်ကျက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူတွေဆီကနေ ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေအကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သင့်ဘဝအတွက် အကြီးကျယ်ဆုံးနောင်တရလာနိုင်သော အမှားများ
သင့်ဘဝမှာ အကြီးကျယ်ဆုံးနောင်တရလာနိုင်သောအမှားတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ လုံးဝပြန်သွားပြီး မပြင်နိုင်တဲ့အမှားမျိုးတွေပေါ့။ တချို့တွေကတော့ တော်တော်များများပြောတတ်ပါတယ်။ အမှားဆိုတာ အမှားမှန်းသိရင် ပြင်လို့ရတယ်လို့ပေါ့။ တကယ်တမ်းတော့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရှင်သန်ရသမျှမှာ လုံးဝပြန်ပြင်မရတဲ့အမှားတွေရှိပါတယ်။ တချို့အမှားတွေက အမှားမှန်းသိတာနဲ့ ချက်ချင်းပြုပြင်ဖို့ မလွယ်ကူတာမျိုး၊ အခြေအနေအကြောင်းအကြောင့် မှားမှန်းသိနေပေမယ့် မပြုပြင်နိုင်တာမျိုးတွေ ကြုံနေရတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲ
ဘဝမှာ မဖြစ်မနေ သတိလေးထားပြီး လုပ်သင့်တဲ့အကြံပေးချက်တွေကို လိုက်နာထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒါမှသာ ပြုပြင်မရတဲ့အမှားမျိုးကို မလုပ်မိစေဖို့ သတိထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်တွေထဲက အချို့သောအချက်တွေကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကိုကြိုတွေးပြီး အကောင်းဆုံးကို အစွမ်းကုန် ပြင်ဆင်ထားခြင်းက သင့်အတွက် အနိုင်ရဖို့သေချာစေပါတယ်။
“အဆိုးဆုံးကို ကြိုတွေးပြီး အကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ထားပါ” ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လူတစ်ချို့ကတော့ အဆိုးဆုံးကို ကြိုတွေးပြီး တဖွဖွပြောနေတတ်တာမျိုးကို မကြိုက်တတ်ကြပါဘူး။ နမိတ်မရှိဘူးလို့လည်း ယူဆတတ်ကြပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ ဒီစကားပုံက အမြဲတမ်းအဆိုးတွေကိုချည်းတွေးနေခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုးတွေကြားထဲမှာပဲ အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ ပိတ်မိနေပြီး အဆိုးကို တသသ ခံစားရင်း Drama ချိုးပြီး အချိန်ပြည့်ဝမ်းနည်းနေခိုင်းတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဘယ်လိုနေရာမှာမဆို အစွန်းရောက်တာကတော့ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒုက္ခမလာခင် ဒုက္ခကို ကြိုမြင်ယောင်ပြီး ထိုင်ပူဆွေးနေခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်။